Kuomesa kwaTrump kuenda kuChina ndiko kutanga kwekudonha kwedhora nekudonha kwehupfumi? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 18 May 2020	• 12 Comments
Nekuburitswa kunoteedzana kwegoridhe chiyero uye chiyero chemafuta, dhora racho rakashanduka kuita mari inodhinda pasina miganhu. Tinozvidaidza kuti Fiat mari. Mari yeFiat yakashata kutengeserana kwenyika. Pashure pezvose, kudhinda mazana emabhiriyoni chinokonzera depreciation mari.
Nekuti US central bank (iyo Fed) inodzora danho rekugadzira dhora iri uye dhora ndiyo chiyero mukutengeserana nedzimwe nyika, kuderera kweiyo dhora kunokanganisa kudzikisira kwemamwe madhora, kusanganisira euro.
With nomutengo Upfu mafuta kwekanguva kuenda kunaka (izvo zvaireva zvokuti unofanira mari kutenga mafuta) ichangopfuura mavhiki, chinhu chakanaka kuti kuti mafuta hachisisiri mureza. Oiri ichatsiviwa nenzira chero ipi neBill Gates chidiki chitsva (kwawakananga chiedza chezuva kugadzira hydrogen yemagetsi enjini).
Chikonzero chete tiri vakasara vaine chinhu-kuti-kuti-akafukidzwa dhora mwero iri US uto hegemony (saka kure). NATO yakamanikidza nyika dzese kana mutungamiri kuti atendeuke kubva kudhora. Zvagara zvichipindira nemabhomba nemabhomba uye kuchenesa mutungamiri.
Yugoslavia 90s. Kashoma chero chikwereti (saka dhora yakazvimirira). Mauto ane simba (kwete nhengo yeNATO uye kwete. 4 maererano nesimba remauto munyika). Mushure mekufa kwaTito, vanhu vakatanga kuteedzera mumwe neumwe kutanga hondo yaifanira kuparadza nyika, vachibvumidza IMF kupinda mukati uye kukwereta mari yekuvakazve (kuderera kwedhora).
Iraq, Saddam Hussein aida kutengesa mafuta muma euros. Saka suka.
Libya, Moammar Mohammed al-Qadhafi aida wakakombama goridhe African Dinar kusunungurwa dhora kuyanzva. Tidy uye neakachena.
Zvino kuti Hondo muSiria yakaratidza kuti NATO (chidhindo cheAmerica) simba harisisiri rakanyanya, ndizvo zvakare iko kutanga kwemagumo epasi rose dhora. nyika More uye vakawanda vari vasafuratire pamusoro US, uye mhinduro Donald Trump raMwari chete ndiko makasimba mutsetse: dzaishandiswa hondo. Uye zvino - nemamiriro ezvinhu ekoronavirus - anowira kumashure achienderera mberi nekukanda China mukuputsa. In okupedzisira hurukuro yake Fox News akataura kunyangwe iye arikuda kuseta tese tese neChina.
Kune rekodhi, zvinobatsira kuziva kuti hurumende yeChinese yakakwanisa kuchengetedza hupfumi hwayo zvakanyanya kana zvishoma dhora rakazvimirira. Dhora iro raingoshandiswa kutengeserana kwenyika dzese, asi bhangi repakati peChina rakagara richitenga madhora kubva kumarudzi mazhinji uye rakakwanisa kuchengetedza Yuan yakasimba mukati memiganhu yayo.
Uye zvakare, China ine huwandu hwakakura hwehupfumi munyika zhinji pasi rose uye chirongwa cheChinese Belt uye Road Initiative (BRI) inovimbisa kudyidzana nenyika zana nemakumi manomwe nemakumi mana emarudzi mazhinji. Izvo zvinoita kuti nyika idzo nemakambani vanyanya kutsamira neChina.
Kana Donald Trump adaidzira kuti ari kuda kudonhedza China zvachose, zvakangofanana nechiitiko chechangobva kuitika chekupererwa nemukuru wepamusoro uyo arikuramba kubatwa kwake. Wakati Trump achinyepedzera kuti kutsamwa kwake kune chekuita nemaitiro eChina kuhutachiona hwekorona, chikonzero chaicho chekushungurudzika kwake ndechekuti dhora ririkuda kurasikirwa neyekutengeserana kwepasi rose uye Chinese yuan iri kuwana pasi.
China yakaunza imwe mukati memiganhu yayo itsva cyber mari Achishandisa mubhadharo: e-rmb (Ren Min Bi, izvo zvinoreva kuti 'vanhu mari'). Iyi e-RMB ikozvino iri kuyedzwa mumaguta akati wandei eChinese, anosanganisira Shenzhen, Suzhou, Chengdu uye Xiong'an. Mumaguta aya, iyo e-RMB ingangove inogamuchirwa pamubhadharo wevashandi, zvifambiso zvevoruzhinji, chikafu uye zvinotengwa muzvitoro zvakawanda. The Hurongwa unesungano WeChat uye AliPay (kubva Alibaba). Iyi itsva cryptocurrency yakafukidzwa neChina Central Bank.
IMF yakavimbisa musimboti weSpecial Drawing rights muna 2016, umo iripo "yekare mari" inoumba rudzi rwe backup yeiyi SDR itsva cryptocurrency chiyero. Zvisinei, chinetso ichi IMF danho, ndiko kuti dhora rinoumbwa 41,73% mugove mukati cryptocurrency ichi chitsva mureza, ukuwo Chinese yuan ane 10.92 chete% mugove (Japanese Yen 8.33%, British paundi 8.09%, euro 30.93%). Saka nepo hupfumi hweChinese hwave pedyo kuve hupfumi hwakasimba kwazvo munyika, chikamu cheIMF crypto standard (iyo SDR) idiki zvisingaite.
Saka iko chaiko kune zvemari kurwa kuri kuitika; hondo kuti inotenderera kuisa itsva mari mureza. Dhora rinoratidzika kunge riri kurasikirwa nemasimba uye dambudziko re corona rakapa kukurudzira kwekupedzisira, sezvo chishina chemari hachina kumhanya zvakanyanyisa. Ikozvino chirevo, nekuti hapana mari yakadhindwa zvakare. kwenhamba kombiyuta chete iri incremented.
The Chinese yuan sokuti kuchisimba, apo mari iri kurasikirwa zvikuru uye kunokosha zvikuru.
Mubvunzo zvino kana multinationals nemabhangi vanoda kufamba kubva dhora mureza kuti Currencykuva mureza kana kuti parege kuva dzakawanda yemandorokwati yakati zvakare. The SDR somunhu crypto mwero hazvirevi sokuti kuva akavimbika kusarudza kana, nokuti pamwe depreciation pamusoro dhora, kuti SDR vo chakwira nayo (nokuda dhora mugove 41,73% kuti SDR). Saka iwe unofanirwa kubvisa pesvedzero yemari ye fiat (yakadhindwa mari yakawanda) sehwaro hwehurongwa hwemari yepasi rese.
The dhora sokuti yakasvika kwayo yekuguma. Hupfumi muUS neEurope zvicharohwa zvakaomarara mumwedzi inouya nemhedzisiro yedambudziko re corona. Mitengo muzvitoro zvikuru yave kutokwira. Makambani akawanda achawira pamusoro uye nekuti mazana emabhiriyoni akadhindwa, depreciation ichi mari ichava pakarepo zvaioneka kuti munhu wose mumwedzi kuuya. Vanhu vachiri nezvimwe zvekuchengetedza vanozotanga kunetseka.
Kutaura zvazviri, imwe nhamo Muchiitiko iri dzokuvanda makambani akawanda uye savers. Nekudonha kwedhora, goridhe rinoratidzika kunge iro chete rakachengetedzeka, nekuti huwandu hwegoridhe munyika hunowanzo kushandiswa kuvhara mari munguva yekugadzirisa mari.
Zvisinei, bitcoin kunoita kuwedzera kupa kuti yakachengeteka. Nekutyisidzira kunogona kuitika kwemabhangi ari kudonha (nekuti makambani anokanganisa uye vanhu vamwe havachakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo kana mubereko pazvikwereti izvozvo), kutyisidzira kwebhech-in uye kubhejera kuri kuvandira. Izvi zvinoreva kuti chero iyo nyika inochengetedza bhangi (verenga: mutero) kana kuti mari inoshandiswa kuchengetedza bhangi.
Saka isu zvimwe tichaona kubhururuka kwakasimba kwemari takananga bitcoin uye goridhe mumwedzi iri kuuya.
Hazvina oneka kuti kutizira bitcoin chichava pakukura, nekuti iwe havambokwanisi kutenga chendarama achapesana ane bhatani. Wakavhura bitcoin wallet pasina imwe nguva uye zviri kubhangi rako nhasi zvichave pane yako bitcoin chikwama mangwana. Kuti ndege kuti bitcoin, pamwe nenheyo mugodhi pairi zvakavakirwa, kungangova kupa bitcoin simba renyika nzvimbo yakadaro kuti ane zvinogona kutora nzvimbo yacho dhora wacho.
Iyo Chinese Yuan inogona kuve yakafukidzwa neChina central bank, asi chikonzero chekuti goridhe richiri kushanda senge backup yepasi rose chakavanzika zvishoma mukuti iwe unofanira kugodhi goridhe. Iwe unofanirwa kuwana izvo kubva pasi kuburikidza nebasa rekuchera mumigodhi yegoridhe, inova inodhura uye inoshanda-yakawedzera maitiro uye kune kushomeka. Iyo Bitcoin yekumigodhi nheyo yakavakirwa pane imwechete zano, sekutsanangurwa kwazvino ichi chinyorwa.
Bhuku bitcoin vanotengesa pose zvino zvikuru kuti zvakawanda multinationals uye vanoita huru dzinofarira mairi uye vari kupinda nayo. Kana iwe ukawedzera icho chechokwadi kune yekuvanda-hyper-kuderedzwa kwemari uye kudonha kunogona kuitika kwedhora, zvinoita sekunge kune vakawanda bitcoin ndiyo ichagara bhomba. Izvo zvine mukana wekuisa mutsva wepasi rose chiyero uye kana dhora rakawa, bitcoin ingangotora nzvimbo yedhora mune iyo IMF's SDR cryptocurrency standard.
Source chinyorwa listings: edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Kunyange zvazvo Trump iri kuita chirango chake, hondo dzeChinese dziri kutora nzvimbo yeodhora kakawanda
Nhoroondo inoratidza kutenderera kwemakore makumi mapfumbamwe nematanho ese anoratidza kusadzivirika kwakadzika kudzika
Venezuela ndiyo muenzaniso wezvatinotarisira uye yeEurope uye kuiswa kwe cryptocurrency semamiriro ezvinhu enyika
Sezvo Trump inokanda mafuta pamoto pamusoro peNorth Korea, Jerusarema neVenezuela, simba rinosimuka kumabvazuva
Tags: uye, bhandi, bitcoin, bri, China, Chinese, coronavirus, dambudziko, dhora, e-rmb, Featured, kuderera kwemari, kutanga, mugwagwa, SDR, Trump, f, yuan
Mukufunga kwangu, isu tichatanga kuona kupatsanurwa kwe USD pakati penyika (peturu) dhora uye yemuno USD yeUSA pachayo. Dzokupedzisira dzichadya zvakanyanya, senge mamiriro akaita seVenezuela. Kupatsanurwa kwedhora iri chikamu chekugadzirisa mari zvakare, sezvo nyika imwe neimwe yakaisa mari yakawanda yekuchengetedza vagari (mumari yemuno, senge Iniase rupees) muzvikwereti zveUS mubhanga reayo chikwereti chekubhadhara kutengeserana nedzimwe nyika inogadziriswa muUSD. Nyika saka hazvizomboda kuona izvo zvavanotaura zveUS z z = kubuda nekuda kwe hyperinflation, saka zano rekupatsanura. Zvakare, China inazvo inopfuura matani matatu ezvikwereti zveUS. Kana China ichida kuenda zvisizvo vanogona kukanda chikwereti pamusika uye kana pasina chinodikanwa, FED ichafanira kutenga chikwereti ichi icho chinokonzeresa hyperinflation muUSA. Kuomarara kwaTrump maererano nemitero yehondo saka zvinoita senge ndiyo nhanho yekuti masasi aise mari iripo. Usakanganwa kuti kudzoreredzwa kwemari kunoreva kuti chikwereti chakawanda chicha bviswa, nekuti ne reset hapana pundutso mukati mekusanganisa zvikwereti zvakashata kubva ku bankrupt system mu new system. Ndapota cherechedza, izvi zvinongoshanda kune boka rakasarudzwa uye kwete kune mokwereti kana vanhu vane zvikwereti zvakavanzika, izvi zvinongoenderera mberi muhurongwa hutsva. Ini zvakare ndinotenda kuti tichaona kukoshesa kukuru kwedhora rekunze risati ranyangarika kubva pachiitiko ichi. Kuwedzera uku kunonyanya kukonzerwa nekuda kwemadhora kuti agadzirise zviwanikwa zvese zvakaoma. Ini ndinofunga ino ichavawo nguva yekuti vatambi (mabhanga pamwe nemabhangi epakati) vachatengesa chikwereti chavo cheAmerica.
Hydrogen ndiko kusimba kwesimba kuri kuuya uye kuchaita kuti paradigm ishanduke. Zvishoma kunze kwezvikonzero zvehupfumi zvakananga, angangoita ese mhando dzakavakirwa pane zvekare simba simba rinogona kusiya hwindo.
Hondo yemumiriri pakati peChina neAmerica yatopfuurira uye ichangokwirisa chero rufu rwemumiriri weChina kuIsrael nekurehwa kwehupenyu hwese. Iko kuvaka-mauto muSouth China Sea (Diego Garcia) inofanirwawo kutariswa.
Hong Kong yaive yekirasi yekutanga yeCIA Otpor kushanda uye zvechokwadi China ichapindura munzira yayo kana nguva yacho iri chaiyo.
@salmon, ichave iri nyaya yenguva.
kunyangwe zvimwe zvirango, TSMC ikambani yeTaiwan inonzwisa tsitsi kuChina.
Yepasi Pose Yepamusoro Yechibvumirano Chipmaker Mahara Anunura KuHuawei SeNew US Sanctions Bite
Mupostori wekuIsrael musi wa 4 chan akati Shin Bet, weIsrael wemukati 'Mossad', akauraya mumiriri pachikumbiro cheChina mushure mekunge Du Wei aedza kukanganisa uye kugovera ruzivo pamusoro peChina bio-war labs, yakabva yadamburwa kaviri.
ona pamusoro mavhidhiyo kubva kuZIO kune yakawandisa iri panjodzi kune vakajairwa vanofungidzira.
« Direct demokrasi nzira yakapfupika kubva kuvharika nekudzoreredza hupfumi
Iwe haugone kupinda muchitoro kana iwe ukasapa zita rako nehuwandu hwevaranda panzvimbo yekubatirana uye izvo zvinongova kutanga »
Kushanya kwakazara: 2.515.388